Mbeu dzeRoto dzaGanesha | MyWeedSeeds.com
Mbeu dzeGanesha dzeRoto mbanje muchinjikwa unoshamisa pakati peChiedza cheNorth chakakurumbira uye inonzi "Shiva" (yakatumidzwa zita remumwe wevatatu vakuru vevaHindu). Ganesha anoremekedzwa muSoutheast Asia yese nekugona kwake kubvisa zvipingaidzo. Kurota kwaGanesha kwakagara nhaka yakakura, THC yakafuma mabukira uye goho rakakura kubva kuNorth Chiedza, uye hwema hunhu uye hunhu kubva kuShiva. Kurota kwaGanesha kuri nyore kukura. Anofarira mamiriro ekunze anodziya kana akura kunze, asi anogona kujairana nemamiriro eEuropean. Iye anoita mushe mumba uye mumatura. Chiroto chaGanesha chakasimba uye chinodzivirira tupukanana chirimwa chinokura chipfupi uye chakasvibira chine mashizha akasvibira akajeka. Anobudirira paivhu revhu. Tarisira kunhuwirira kusingawanzoitika kubva kuGanesha's Kurota mbanje chirimwa. Hutsi hwake hwakati simbei zvishoma pane hwemubereki wake Chiedza cheKumaodzanyemba, uye uchaona wakasimba kumusoro.